कसले काट्यो भूकम्प पीडित नयनकुमारीको नाम ? पाइनन् अनुदान रकम, खुला अाकाशमुनी बास — Imandarmedia.com
कसले काट्यो भूकम्प पीडित नयनकुमारीको नाम ? पाइनन् अनुदान रकम, खुला अाकाशमुनी बास
ओखलढुंगाको मानेभज्याङ गाउँपालिका–७ घर भएकी नयनकुमारी अधिकारीको घर भूकम्पले पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ तर उनले अनुदानको नाममा जम्मा ३ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएकी छन् । ७२ वर्षीया वृद्धा नयनकुमारीको भूकम्पपछि बस्ने बास पनि छैन ।
जसोतसो भत्किएको घरको आँडमा पाल टाँगेर बसिरहेकी छन् । हिउँदमा त दुःख सुख बस्न सकिने भएपनि वर्षामा चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको नयनकुमारीले बताइन् ।